Indawo yokuphumla eluNxwemeni Kufuphi noLwandle! - I-Airbnb
Indawo yokuphumla eluNxwemeni Kufuphi noLwandle!
Indawo entle ephangaleleyo kunye nekhaphukhaphu egcwele umakhulu-eflethi, ebekwe kwesinye sezona zitrato zintle ebumelwaneni kwaye ngaphesheya kwesitrato ukusuka epakini echibini elinonxweme lwalo oluncinci. Hamba uye kunxweme oluphambili, uMlambo iMaroochy, iNovotel Resort okanye iikhefi zalapha ekhaya, zilungele ukubaleka elunxwemeni ngokuzolileyo! Ubumfihlo buqinisekisiwe, njengoko ifulethi izimele kwaye ikwiphiko layo lekhaya elinomnyango wabucala kunye nokufikelela esitratweni okwahlukileyo.
Le ndlu yayakhiwe ngenjongo xa le ndlu yayisakhiwa ukuze ibonelele indawo yokuhlala yabucala kunye nebanzi yeendwendwe. Ukufikelela kwindawo yokuhlala ngesango elahlukileyo ukuze ukwazi ukuza kwaye uhambe kwaye uzive ngathi untywiliselwe ngokwenene kwindawo yakho yokuhlala kwindawo entle yendawo.
Isithuba esinonxweme oluqaqambileyo kwaye sizaliswe kukukhanya kwelanga ngakumbi kusasa okukhethekileyo. Le ndawo siyinike ifanitshala ekumgangatho ophezulu kunye nezixhobo zombane kwaye uya kuba nokufikelela kuyo yonke into oyifunayo ukuze uhlale kamnandi kwaye uphumle. Ipatio ebanzi / indawo engasemva ikuvumela ukuba uphume ngaphandle, kwaye awuzukuziva uvaleleke ngaphakathi endlini konke konke.
Isitalato sasekhaya siphawulwa yimithi emininzi nengca eluhlaza kunye neegadi. Yindawo yosapho ezolileyo ekhululekile ngokupheleleyo kwaye ikhuselekile. Kukho ipaki enkulu ngaphaya kwesitrato enokufikelela ngaphambili kwechibi kunye nolwandle oluncinci oluhle kakhulu ukuba ube nesiselo kwaye ubukele ukutshona kwelanga, okanye uphose umgca kwaye ube nentlanzi.
Indawo efanelekileyo yokubiza ikhaya nokuba undwendwela inkomfa kwindawo yokuchithela iholide ekufutshane okanye ukutyelela ummandla wethu omhle.
I-Twin Waters yindawo engaselunxwemeni kwaye ibekwe kwindawo efanelekileyo kunxweme olusemantla oMlambo iMaroochy. Indawo ephantsi kwedolophu yonakaliswe zizitrato zayo ezinamahlamvu, i-lagoon entle enkulu, kunye nokuba kufutshane neelwandle ezingapheliyo ze-surf, iMaroochy River Conservation Park, iklasi yegalufa ye-18 ekumgangatho wehlabathi, iikhefi zasekhaya, iivenkile zokutyela kunye neevenkile. INovotel Twin Waters Resort ikwabonelelwa ukuba abantu balapha bangene kwaye bonwabele ibha, iindawo zokutyela kunye nezinto ezenziwayo Zininzi iindlela kunye neepaki kulo lonke ilizwe ezilungele uhambo lokuphumla.
Le ndlela yokuphila efunwayo ikwayi-10mins nje yokuqhuba ukusuka kumbindi wesixeko saseMaroochydore apho unokufumana amaziko okuthenga amakhulu kunye nezinto eziluncedo zabakhenkethi. Ikwayi-10mins ukuya kwisikhululo seenqwelomoya!
I-Mudjimba Beach yimizuzu nje embalwa uqhubela emantla kwaye ine-vibe epholileyo yaselunxwemeni eyona nto ithandwayo ngabantu basekhaya ukuba bangene kwikofu kwiikhefi ezinkulu zasekhaya okanye baye kuqubha.
Siyafumaneka ukuphendula imibuzo yakho okanye uncedo ngayo nantoni na apho ifuneka khona. Eyona ndlela ilungileyo yokunxibelelana ngo-Airbnb.